Pụrụ Iche Skin Manufacturers, Suppliers - China Practice Skin Factory
Soft Silicone Large Ọzụzụ Skin maka Isi Art Ru Artificial Blank Full Back Tattoo Practice Skin
Ezigbo silicone, dị nro ma dịkwa mfe agba, ọkpụrụkpụ 0.3cm, Nkọwa: Mgbanwe na-agbanwe agbanwe, akpụkpọ anụ, ezigbo nkwado maka ndị mbido. Na-emitomi ụdị nhazi nke anụ ahụ mmadụ, A na-eme ya site na ihe pụrụ iche nke dịkarịrị nso na anụ ahụ mmadụ, na ọdịdị ya dị nro ma na-agbanwe agbanwe na nke anụ ahụ mmadụ. Ọ bụ usoro kachasị mma maka ndị mbido tupu arụ ọrụ. (Studentsfọdụ ụmụ akwụkwọ kwuru na omume akpụkpọ ahụ dị mfe inyi. Ebe a bụ ụzọ dị mma maka gị, m ...
39.5 * 30 * 0.3CM A3 size Rubber Artificial skin for Permanent makeup makeup Soft Na-agbanwe agbanwe Silicone Tattoo Practice Skin
1.Buantity: 1pcs 2.Med site nri-ọkwa silicone ihe onwunwe 3.Flexible na yiri yiri mmadụ akpụkpọ, oké ezu maka sọrọ-n'akụkụ ojiji 4.Free sere na nyefe ụkpụrụ, ọ bụ ihe kasị mma na-eme anụ maka beginners iji. Nkọwapụta: Ihe: Artificial Soft Leather Dimensions: 395 * 300 * 3MM Package Soro: 1 x Tattoo Practice Skin Description Layred na abịakọrọ tattoo omume anụ ahụ na-ejigide ink na-ehichapụ-ike na-eji ákwà ma ọ bụ akwụkwọ towel wepụ ngafe ink! Kedu ihe bụ isi ...
20cm * 30cm oghere Practice Skin Maka-adịgide adịgide etemeete Microblading igbu
Blank Practice Skin For Permanent makeup Microblading Tattoo Ngwá Ọrụ Ngwa Sịntetik Skin Njirimara: 1.Tatị ahụ na-eme ka akpụkpọ ahụ adịghị adịghị ọcha ma nwee mmetụta mmetụ akpụkpọ ka mma. 2.Plain maka usoro igbu egbugbu, na - enyere gị aka ịmụ etu esi egbu egbu egbugbu. 3.Mee usoro dị iche iche, site na ịpụta ka shading 4.Extra dị nro, anụ ahụ dị ka ụcha, ederede dị nso na anụ ahụ mmadụ ma nwee mmetụta yiri anụ ahụ mmadụ. 5.Ideal maka igbachi gburugburu ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ ma tinye na obi ma ọ bụ azụ ...
3D isi ihu anụ 3D Microblading na-adịgide adịgide etemeete nkuanya egbugbere ọnụ omume Human mannequin isi ihu anụ ahụ
3D Mannequin Head Face Permanent Makeup Practice Skin Include: (2Pcs Anya, 1Pcs Lip, 1 head model) * 1 sets Ọ bara ezigbo uru maka ndị mbido ọhụụ iji mụta etemeete na-adịgide adịgide. 1. Atụmatụ lifelike na-adịgide adịgide etemeete omume anụ ahụ 2. Easily replaceable anya na ọnụ maka Ugboro ojiji 3. Square ebe anya inserts nwekwara ekpuchi nkuanya contours 4. Ọzọ inserts rere iche iche Ngwaahịa a na-eji na-adịgide adịgide etemeete mmụta. Ọ bara ezigbo uru maka ndị mbido. Nwere ike ịgbanwe anya ma mou ...
20 x 15cm Blank Tattoo Practice Skin Mpempe akwụkwọ
Emere ya site na sịntetik akpụkpọ-dị ka roba na-agbanwe agbanwe Nke a dị mma maka ịmụ etu esi egbu egbugbu maka onye na-amụmụka egbugbu A pụrụ iji Azụ anụ a adịgboroja gbaa n'akụkụ abụọ Akụkụ: Nkọwa 20x15cm Weigth: 50g Hazie arụmọrụ gị - Ink nwere ike inwe nsogbu. Oge omume bụ nnukwu ụzọ iji ghọta etu esi arụ ọrụ na egbugbu ahụ. Site na ịzụlite nkà gị, ị ga-ezere ịwụfu na ịgbasa ink n'oge egbugbu gị mbụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta tha ...
Oghere na-adịgide adịgide etemeete Skin 290 * 195 * 3MM Mbido Oké Silicone Tattoo Practice Skin
1. Nyere ndị mbido ngwa ngwa bulie ogo egbugbu ahụ 2. Ihe na-arụ ọrụ, nchekwa, na-enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ. 5. Na-eme ka ọrụ onye na-ese egbugbu dị mfe. Aha: omume akpụkpọ anụ Ihe: silicone Ebe a na-adọba ụgbọala: 290 * 195 * 3MM Nnukwu Ibu: 0.22 n'arọ Kachasị Mma Mma Skin Naanị afọ ole na ole gara aga, ndị na-ese egbugbu nwere oke nhọrọ mgbe ọ bịara na-eme akpụkpọ. Ejiri roba ma ọ bụ plastik mee ọtụtụ n'ime ha, ...
Ogwe aka-jide na bandeeji Soft agbanwe agbanwe Silicone Tattoo Practice Skin
1. Ihe: Akpụkpọ anụ Soft Soft 2. Akụkụ Typedị 1: 20 * 20 * 3cm 2dị 2: 15 * 15 * 3cm Ihe ngwugwu gụnyere: 1 x attdị Omume Improdị Mma Imezi Nkà Gị na Tdị Omume Tattoo Ọbụna onye ọkachamara kachasị mma na-atụ egwu mgbe niile na-amụ ihe. usoro ohuru na igbali ime ka usoro ha di. Akpụkpọ ahụ ịmị egbugbu bụ ihe kachasị mkpa maka nka na-emegharị ahụ nke ọma yana ịmepụta iberibe ị nwere ike igosi ndị ahịa gị. Designs taa gụnyere ihe dị mgbagwoju anya na mkpuchi nke na-ewe ...
20 30 * 0.13cm igbu nkuanya nku anụ akwa mma Na-adịgide Adịgide nkuanya igbu ọzụzụ Skin Microblading ọkọnọ akpụkpọ
Dị Mgbu Achọ Omume Akpụkpọ anụ dị elu ọzụzụ ọzụzụ *** Ngwugwu: 1pcs *** Ala dị larịị maka imepụta ihe na omume na-adịghị mma, Na-eme usoro dị iche iche, site na ịkọwapụta ka shading *** Mere site na sịntetik akpụkpọ-dị ka ihe onwunwe *** Nye gị ohere imeziwanye gị nkà na-enweghị ihe na-eme na ezigbo akpụkpọ ahụ na-agbanwe agbanwe ma nwee mmetụta yiri nke anụ ahụ mmadụ, Nke zuru oke maka iji akụkụ abụọ arụ ọrụ: Tdị Omume Tattoo: 200 * 300 * 1.3mm Weight: 0.1kg Mbukota: 1pc / opp bag How to Use Ọma Tattoo Practice Skin Na ord ...
20 * 15 * 0.13cm igbu nkuanya nku anya akpụkpọ anụ dị elu Na-adịgide Adịgide nkuanya igbu egbugbu ọzụzụ Microblading ọkọnọ anụ ahụ
Dị Mgbu Na-eme Skin akpụkpọ anụ ọzụzụ dị elu maka etemeete Akụkụ: 1. Nyere ndị mbido ngwa ngwa bulie ogo egbugbu 2. Ihe eji eme ihe, nchekwa, na-enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ 5. Na-eme ka ọrụ onye na-ese egbugbu dị mfe. Nkọwapụta: 1. Ihe: Akpụkpọ anụ Soft Soft 2. Akụkụ: 200 * 150 * 1.3MM 3. Net Net: 80g / PCS ngwugwu gụnyere: 1x Tattoo Practice Skin Tattoo Practice Skin - Atụmatụ na Uru Ọ naghị '...